Howlgallo laga sameeyay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 29 April 2019
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa habeenkii labaad waxaa ay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Dharkenley ee Gobolkan Banaadir, howlgalkaas oo lagu soo qab qabtay dad u badan dhalinyaro.
Ciidamada ayaa baaritaano ku sameynaya Gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka Shaqeeya degmada Dharkenley iyo degmooyinka kale ee gobolka Banaadir,waxaana sidoo kale howlgalkooda uu ahaa mid guri guri lagu baarayey.
Dad u badan dhalinyaro ayaa howlgalkaas lagu qabtay,waxaana Goobjoogayaal ay sheegeen in Goob la isugu geeyey dadka,isla markaana badankood la sii daayey halka qaarkood ay Ciidamada weli baritaano ku hayaan.
Dad ku sugan Xaafadaha Dabakaayo Madoow iyo Xoosh oo inta badan howlgalka laga sameeyey ayaa waxaa ay sheegeen in howlgalka uu xalay saameyn ku yeeshay Ganacsiga, hayeeshee markii dambe ay dib u furmeen.
Waa habeenkii labaad oo Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ay howlgalka ka sameeyaan Xaafado ka tirsan degmada Dharkenley,waxaana la sheegay in uu daba socdo howlgallo si joogto ah looga sameeyo degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir.
China says belt and road cooperation is a long- term endeavor
Shir muhiim ah oo ka furmaya Muqdisho